niarahana tamin’ireo mpandraharaha misehatra amin’ny taotrano sy ny asa vaventy sy ny tompon’andraikitry ny tetikasa ary ny fiadidiana ny repoblika. Tamin’izany indrindra dia natao sonia tamin’ny faran’ny herinandro teo ny fiaraha-miasa eo amin’ny sendikan’ny orinasa misehatra amin’ny taotrano sy ny asa vaventy na (SE – BTP) sy ny Fanjakana. Amin’ny maha fananganana tanàna vaovao ny tetikasa dia nambara fa hanaraka ny fivoarana ara-teknolojia ny Tanamasoandro. Hametrahana “connexion” avokoa mantsy ireo toerana hifamezivezen’ny daholobe sy ireo tranom-panjakana, araka ny fanazavan’ny minisitry paositra sy ny fifandraisan-davitra. Nilaza kosa ny teo anivon’ny SE-BTP fa hanamafy ny traikefany ary efa nisy mihitsy ny programa novatsian’ny agence francaise de développement (AFD) vola mitentina 9 tapitrisa Euros hatokana ho amin’ny fanofanana arak’asa azy ireo. Tanjona, hoy ny filohan’ny Sendika, ny mba hananan’ny orinasa Malagasy traikefa feno sy ampy amin’ny fanatanterahana tetikasa fananganana fotodrafitrasa goavana eto amin’ny firenena. Amin’ny ampahany voalohany izao aloha dia 387 ha no velarantany hananganana ny tetikasa ary nolazaina fa ho marobe sahady ireo asa hatao ao anatin’izany.